Pope Francis wuxuu rabaa "abaabulinta dhammaan" si loo dhiso Notre-Dame - TELES RELAY
ACCUEIL » International Pope Francis wuxuu rabaa "abaabulinta dhammaan" si loo dhiso Notre-Dame
Pope Francis wuxuu rabaa "abaabulinta dhammaan" si loo dhiso Notre-Dame
Ka dib markii dab ka kacay kaniisadda Notre Dame Cathedral ee Paris, Pope Francis diray diray telegram ah Archbishop ee Paris.
In dhambaal uu u soo diray inuu Archbishop of Paris, Monsignor Michel Aupetit, Pope Francis ayaa sheegay in uu xiriir la leh murugo "iyo sidoo kale in ee aaminka ah ee Sheeko, deggan Paris iyo Faransiis oo dhan ".
"Maalmahan Quduuska ah ee aan xusuusto dabeecada Ciise, dhimashadiisa iyo sara kicitaankiisa, waxaan idiin xaqiijinayaa inaan dhowaan ruuxi ah iyo salaadda aan ku leeyahay," ayuu sii raaciyay Pope Francis.
Pope sidoo kale wuxuu rabay inuu ku daro in uu ogaa taas dabkii burburiyay Notre-Dame de Paris ayaa sidoo kale si baaxad leh u saameysay wadarta guud ee "Parisians iyo Faransiiska ah ee ku kala duwan kala duwanaanta xukunkooda".
Waxa uu ku baaqay "abaabulinta dhammaan" si loo dhiso Notre-Dame oo ah kaniisadda, oo uu dabka ka jabay, wuxuu noqon karaa "muraayadda naqshadeynta xasuusta wadajirka ah".
"Kaco geesinimada iyo shaqada ee dabdamiska kuwaas oo soo dhexgalay in uu dabka ku jira, waxaan muujiyaan rajada ah in Cathedral Notre Dame noqon kartaa in shaqada dib u dhiska iyo abaabulka oo dhan, this jawharad qurux badan qalbiga mahad magaalada, oo calaamad u ah iimaanka kuwa dhisay, kaniisadda hooyada ah ee Sheeko, oo dhaxalkaygiina naqshadda iyo ruuxiga ah ee Paris, France iyo aadanaha, "gabagabeeyay Pope ee uu telegraam.
Aude Solente oo la jooga AFP
Our Lady: badbaadinta dhismaha "waxaa lagu ciyaaray daqiiqado 15-30"
HARGEYSA OO LAGU QAADAY MACRON MIDNIMADA